ओली सरकार सात महिनामै नाङ्गै – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ओली सरकार सात महिनामै नाङ्गै
प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन २४
ओलीका केही सकारात्मक पाइलाहरुलाई र उनका देशभक्तिका खासगरी भारतीय नाकाबन्दी र मधेसी दलका केही नेताहरु (खासगरी महतो, ठाकुर, राउतआदि)का नेपालविरोधी अभिव्यक्ति र गतिविधिका विरुद्ध आफूलाई खडा गरेको देखेर नेपाली जनताले यदि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने देशको स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामाथि भारतीय गिद्दे दृष्टिमा छेकबार लगाइने छन् र नेपालको विकास र समृद्धिको मार्ग अलि फराकिलो बन्ने छ भन्ने आशा र भरोसामा गत नीर्वाचनमा संसदमा र प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमत दिए । अत्यधिक मत ल्याउनेहरु विगतका एमाले र माओवादी केन्द्र र केही अन्य ससाना कम्युनिस्टका सदस्यहरु छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वका माओवादी केन्द्र त भारतको र मधेसी नेताहरुको गुलामीमा बदनाम बनेको यथार्थ थियो, तर ओली भने यति छिट्टै नाङ्गै हुने छन् भन्ने नेपाली जनताले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । हुन त नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आफ्नो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चामार्फत निर्वाचनको उपयोग गर्ने नीतिअनुसार संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै निर्वाचनकै दौरानमा भनेको थियो– “यो वाम गठबन्धन केवल जनतालाई कम्युनिस्टको नाममा भ्रम दिएर पाँच वर्षका लागि उनीहरुलाई वेवकुफ बनाएर नेपालमा सत्ता र सरकार चलाउने रणनीति हो । यिनीहरुबाट देश र जनताका पक्षमा खासै उपलब्धीपूर्ण काम केही पनि हुने छैनन् ।”
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले निर्वाचनकै दौरानमा र पछि पनि भन्दै आएका कुराहरु अहिले नेपाली जनताका मात्रै होइनन्, स्वयम् ओलीको पार्टीभित्रका केही नेताहरुले बोल्न बाध्य भएका छन् । ओली सरकार बनेपछि उनी १८० डिग्रीमा आफूलाई बदलिदिएका छन् । राष्ट्रियता सवालमा उनी यति बदनाम बने कि स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘भैया’ भन्ने हिम्मत गरे । उनको भ्रमणका दौरानमा भारतीय कमाण्डो फौजलाई जनकपुरबाट छिराएर मुस्ताङ्सम्म मार्चपास गर्ने काममा सहयोग गरे । त्यति मात्रै कहाँ हो र ?
भारतीयहरुद्धारा तयार पारिएको सुदुर पश्चिमको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आदि क्षेत्र ओगटेको करीब ३७२ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल नेपाल भूमि भारतीय नक्सामा गाभिएको नेपालको नक्कली नक्सा आफ्ना पछाडि टांग्न लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यलयमा मात्र नभई नेपालका सबै सरकारी कार्यालय, सेना, प्रहरी, न्याय क्षेत्र आदि र गैह्र सरकारी कार्यालयहरु, सबै शिक्षणसंस्थाहरुमा समेत पढाउने गरेको उनले चालै नपाएको भनिरहेका छन् । तर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले उनको औपचारिक ध्यान आक्रषित गर्दा समेत यतिका दिनसम्म पनि ती नक्सा सम्वन्धित कार्यालयबाट हटाउने चासो दोखाएका छैनन् । नेपालको सिमा मिचिएको बारे केही बोलेका छैनन् ।
अहिले आएर भारतीयहरुको चासो संविधानमा संशोधनद्वारा उसका इच्छा पूरा कसरी गराउने त्यसमा लागेका छन् । भर्खरै उनले संविधान संशोधनको लागि उनका विश्वासपात्र रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलमार्फत् (गृहमन्त्रीलाई समेत वाइपास गरेर) संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अब यो नागरिकताको बारेमा उनले पेश गरेको उक्त प्रस्तावले नेपालको राष्ट्रियतालाई फिजीकरण गर्दै सिक्किममिकरणको मार्गतर्फ लैजाने निश्चित छ । यसरी ओलीको राष्ट्रवाद पूरै नाङ्गिएको छ । त्यसैगरी नेपाली जनताका जनजीवीका झन् झन कठिन बन्दै गएको छ । ओली र उनका मन्त्रीहरु सबै कमाउने धन्दामा लागेको देखिएको छ । नेपाली जनताको अतिआवश्यक तरकारी र चिनी तेल आदिमाथिको तिनीहरुले लिएका कमिशनका कुराहरु बाहिर पत्रपत्रिकामा छयाछयाप्ती आएका छन् । चिनीमा अरबौं रुपैयाँको कमिशन, आलु तरकारीमा त्यस्तै कमिशन आखिर ओली सरकार कमिशनको खेलमा चुर्लुम्मै डुब्दै गएको छ ।
गृहमन्त्रीले सिण्डिकेटको ढाड भा“चे भनेर कुर्लिए । सुनकाण्डको माफियाको जालो तोडे भनेर कुर्लिए, शान्तिसुरक्षा सुदृढ गराए भनेर कुर्लिए । ठेकदारहरुमाथि कडा निगारानीका हुङकार गरे । आखिमा भयो के त ? नेपाली जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । आखिर यी कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरु प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सांसद छन्, त्यसैगरी केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद आदि छन् । त्यसै गरी प्रशासनतन्त्रमा उनीहरुकै मान्छेहरुको बाहुल्यता छ । सेना, प्रहरी आदिमा उनकै बर्चश्व छ । यदि नभए उनीहरुसित जनताको ती सबलाई तह लगाउने दुईतिहाई मत छ । आखिर यी सब देशको हितविपरीत, जनताको हितविपरीत कसले काम गरेको छ त ? उत्तर स्पष्ट यिनै तथाकथित कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरु गाउँदेखि केन्द्रसम्म छन् र यी सबका जिम्मेवार यिनै हुन् । यसो गरेर यी नामधारी कम्युनिस्टहरुले नेपालका अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई पनि बदनाम गराउने काम गर्दै छन् ।
आखिरमा “वामगठवन्धनको नाममा अनेकौं जनपक्षीय नारा दिएर सरकारमा जान सफल भएको ओली सरकारको सक्कली रुप नेपाली जनताको नजरमा त नाङ्गै पो भएर देखिएको छ । ओली सरकार त आखिरमा दलालहरु, तस्करहरु, बलात्कारीहरु, समग्रमा जनताको सरकार होइन रहेछ, यो त भारतीय एकाधिकार दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सरकार पो रहेछ भन्ने स्पष्ट आवाज जनताको बीचमा उठन थालेको छ । ओली सरकार त कति छिटो (७ महिनामै) नाङ्गै ।